कुनै राजनैतीक पार्टीको बलियो आढस र समर्थन बिना यहाँ बोल्न सकिदैन किनकी त्यती बेला कानुन क्रुर र निर्मम बन्छ । हाम्रोमा राजनैतीक अभ्यास नै त्यसरी सुरु भयो । अपराधी , चोर , भ्रस्टचारी र सामाजिक रुपमा तिरस्क्रितहरु पनि राजनीतिमा लागे पछी सबैको सम्माननीय हुन्छन , हामीमा यही बिडम्बना छ र यिनै महासयहरुले हामीलाई राष्ट्रबाद सिकाउछन । आज राष्ट्रबादका पक्षमा बोलौ भने अरास्ट्रिय भईने हो कि भन्ने डर । राष्ट्रबाद अलप्ने त केबल राजनैतीक पार्टीले पो हो त , यहाँ जनताले राष्ट्रबादको नारा लगाए ( सरकार बिरोधी आन्दोलन र अपराधिक झुन्ड जस्तो पो देखिन्छ । स्वतन्त्र बिचार अभिब्यक्त गर्ने अधिकार , नागरिक सर्बच्चोता र मानब अधिकार केबल शासकका लागि मात्र पो हो ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा असहमत हुनु र बिरोध गर्न पाउने अधिकार माथि सत्ता र शक्तीको हबला दिदै निस्तेज पार्नु यो पो हो तरिका । यो पो हो बामपन्थीहरुको जनबादी केन्द्रियता । माओवादीहरुले हिजो भारतका बिरुध सुरुङ युध सुरु गर्दाको राष्ट्रबाद र भारतका राष्ट्रपती मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सामाजिक सन्जालमा जन्मेको राष्ट्रबादलाई हामीले गम्भिर ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ । सरकारले स्वागत गरिरहदा आमनेपाली बाट स्वागत बिरोधी अभिमत जाहेर हुनुमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जिम्मेबार छ कि छैन ?जनतामा यस्तो अपूर्ण र खोक्रो राष्ट्रबाद जप्न लगाउने तपाईंहरु हो कि होइन ? जनताबाट आज अभिब्यक्त यस्ता बिचारहरुलाई बिभिन्न पगरी गुथ्दा तपाईंहरुले आफ्नो कमजोरी स्विकार्ने कि नस्विकार्ने ?
जस्तो बिज रोप्यो तेस्तै फल फल्ने हो महशय । बिकासका आधारभुत सम्रचनाको निर्माण र उत्पादनमा जोड दिदै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालीको पहुचको बिकाश गर्न सके मात्र राष्ट्रबाद र राष्ट्रबादी आन्दोलनको औचित्य रहन्छ । केही पहिला केपी ओली नेत्रित्वोको माओवादी समर्थित सरकारले पनि राष्ट्रबादको जप जपेकै हो , त्यही राष्ट्रबादको जय जयकार गर्दा नेपालीले महीनौको नाकाबन्दी शहनु पर्यो । माओवादीका नेताले पनि साइकल चडने राष्ट्रबाद र हामी कसैको यस म्यान हुँदैनौ भनेको कुरा आज पनि मानसपटलमा ताजा नै छ , त्यस्तै माइती घर मन्डलामा आइ एम विथ केपी ओली भन्ने राष्ट्रबाद पनि हामीले देखेकै हो ।
हिजो बामघटकहरुले देखायको राष्ट्रबाद आज कुन राष्ट्रबादमा परीडत भयो त्यो खुल्दुलीको बिषय भयको छ । सिपाही लाई हतियार बिना युध जितेर आउनु है भनेर पठाय जस्तो बामपन्थीको राष्ट्रबादले घूडा टेक्थ्यो र टेक्यो । हामी आत्मनिर्भर छैनौ ,भारतिय बजार सँग निर्भर नेपाली जनतालाई उत्पादन सँग जोडने केही काम भयो त ? जब सम्म राष्ट्रिय उत्पादनको तिब्र बिकास सँगै प्रबिधी र सम्रचनाको बिकासमा जोड दिन सकिदैन तब सम्म हाम्रो राष्ट्रबाद खोक्रो राष्ट्रबाद नै हो । यही राष्ट्रबादका नाममा बामघटकहरुलाई राजनीति गर्ने सुनौलो अवसर त मिल्छ तर राष्ट्रको बिकास हुने अवस्था देखा पर्दैन । हिजो राष्ट्रबादको जप जप्ने आजको माओवादी सरकार किन उच्च सुरक्षाका साथ अप्रतक्ष्य कर्फ्यु नै लगाएर किन मुखर्जीलाई स्वागत गर्यो त ? सत्ता , शक्ती र अन्तरराष्ट्रिय कुटनैतीक सन्तुलन उसका चुनौती थिय र उसको जिम्मेबारी र बफादारीपन पनि हो ।
आजको सन्दर्भमा एमाले कै सरकार भयपनी उसले पनि यो भन्दा आर्को बाटो अप्नाउन सक्दैन थियो । त्यसैले बामपन्थीहरुले अब राष्ट्रबादलाई नयाँ ढंगबाट परीभाशित गर्न जरुरी छ । नेपाली सिमा मिच्दा उसको भक्ती गान गाउँने राष्ट्रबाद र नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्ने , यि दुबै राष्ट्रबाद देखी जोगिनु जरुरी छ । राष्ट्र सम्ब्रिद्द र सम्मुन्नत नभय सम्म हाम्रो राष्ट्रबाद कमजोर नै रहन्छ र हामी कसैको अप्रतक्ष्य अधिनमा रहिरहन्छौ । हामी कहाँ न स्थाइ सरकार छ , न राजनैतीक दल भित्र राष्ट्रिय शहमती छ ,न नेताको राष्ट्र बिकासमा द्रिढ इक्ष्याशक्ती नै छ । चरम भ्रस्टचारमा फसेका नेताहरु आफु अनुकुल निर्णय गर्दै राष्ट्रबादलाई पारीभाशित गर्छन् । हामी सोझा लाटा जनता राष्ट्रबाद भन्दै उफ्रन्छौ ( बिचरा हाम्रो राष्ट्रबाद । नेपालको बिकास नै राष्ट्रबादको निर्माण हो , त्यो हाम्रा नेताहरु बुझिसकेका छन । केबल उनिहरुले जनतालाई कालो भुमरीमा राखेर राजनीति गर्न खोज्या मात्र हो ।
साच्चै राष्ट्रबादको निर्माण गर्ने हो भने देश बिकासमा समर्पित हुन जरुरी छ । हामी हेर्ने कि नहेर्ने ? आज अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली जनशक्तीको पलायन , राजनीति प्रतिको घट्दो विश्वाश र राष्ट्रिय एकतामा हराश आउनुमा नेताहरु जिम्मेबार कि गैर जिम्मेबार ?सिद्दान्त र बिचारको बिकासमा कार्यकर्तालाई समर्पित गराइरहदा उत्पादन र जिबिको पार्जनमा जोडन नसक्नु कमजोरी हो कि होइन ? अन्धभक्त र पटमुर्खहरु बाट जय जयकार त हुन्छ तर सम्ब्रिध नेपाल र सम्मुन्नत नेपालको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले उत्पादनमुखी कार्यकर्ता , श्रममुखी कार्यकर्ताको निर्माणमा बामपन्थीहरु लाग्न जरुरी छ ,तब बल्ल राष्ट्रबादको नारा सफल हुन्छ । देश बिकास हुन नसके , हाम्रो राष्ट्रबाद कस्तो हुन्छ भने , अन्धाहरुले हात्तीको आक्रिती बर्णन गरे जस्तै हुन्छ ।
वर्गसंघर्ष पहिचान र हाइब्रेड जातीय बिखण्डनका नायकहरु।
के हाे मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद ?–हस्तबहादुर केसी